Tokony hahita toerana any Kerala ho an'ny mpizahatany
Nantsoina tamim-pitiavana ny tanindrazan'ny tenan'Andriamanitra, manan-javatra betsaka atolotra amin'ny fanjakana ny hatsarana voajanahary, ny bibidia, ny kolontsaina manalefaka ary izay rehetra angatahan'ny mpizahatany.
Mila ianao Visa e-Tourista any India (e India or Visa Indiana Online) handray anjara amin'ny fahafinaretana amin'ny maha olom-pirenena vahiny any India. Raha tsy izany, afaka mitsidika an'i India ianao amin'ny a Visa any India e-Business ary te hanao fialam-boly sy fahitana maso any Kerala. ny Fahefana misahana ny fifindra-monina Indiana mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Indian Visa Online (e-Visa any India) fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Alleppy (na Alappuzha)
Sambo trano, Alappuzha
Natao Kristy Venise of the East, Alleppy na Alappuzha dia toerana tokony hitsidihana an'i Kerala. Ny toerana haleha dia fantatry ny be indrindra amin'ny riandrano izay tambajotran-drano, renirano ary farihy izay mandeha manerana ny fanjakana. Misy safidy azon'ireo mpizahatany mijanona Kettuvallams izay tranosambo mandritra ny alina na mandeha mitaingina ora vitsivitsy hiampitana ny riandrano. Alleppy dia trano misy tempoly sy fiangonana be dia be azon'ny mpizaha tany mizaha. Ny farihy Vembanadu izay lava indrindra any India dia eo afovoan'ny riandrano ary ny filentehan'ny masoandro hita avy amin'ny Nosy eo amin'ny farihy dia tsy tokony hohadinoina.
Toerana misy- manodidina ny 75 kilometatra miala an'i Kochi, dia adiny iray
Mijanona ao - traikefa an-tranon'ny sambo lafo vidy - sambo Tharangini na sambo mitafy trano mahafinaritra
Hotely - Ramada Inn na Citrus Retreats
Toeram-piantsonan'i Munnar Hill
Munnar dia ny toerana be havoana masina any Kerala ao amin'ny faritra Western Ghats. Rehefa manakaiky ny tendrombohitra ianao dia afaka mahita fambolena dite sy zava-manitra maro rehefa miampita ireo tendrombohitra. Amin'ny fitsidihanao an'i Munnar dia ataovy izay hahitanao ny lalana mankany amin'ny point Echo hahazoana fomba fijery mahavariana ary hiantsoantso mafy araka izay tratranao ihany koa. ny Atukkal ary Rano Chinnakanal any Munnar dia toeram-pandehanana ihany koa hahagaga ny hakanton'ireo rano misamboaravoara. Tokony handeha ho any amin'ny farihin'i Kundala koa ianao raha any Munnar.
Toerana - Manodidina ny 120 kilometatra miala an'i Kochi, dia adiny telo sy sasany (faritra be havoana)
Hôtely - Fort Munnar na Misty Mountain Resorts
Munnar sy toerana malaza Hill-station any India
Morontsiraka any Kovalam
Ny morontsirak'i Kovalam dia hahatonga anao te-hijanona eto mandrakizay rehefa mahatsapa ny fasika amin'ny tongotrao sy ny fitsokan'ny ranomasina ny volonao. Kovalam no toerana halehanao mba hialanao amin'ny korontana amin'ny tanàna iray. Nosy Poovar dia toeram-pialantsasatra malaza telopolo minitra miala an'i Kovalam izay hanodidina anao amin'ny rano amin'ny lafiny rehetra. Ny renirano Neyyar dia mihaona amin'ny ranomasina Arabo akaikin'ny Nosy ary mahatazana maso tsara azy.
Toerana - Manodidina ny 20 kilometatra miala an'i Thiruvananthapuram, latsaky ny antsasak'adiny
Hotely - Vivanta avy amin'i Taj Green Cove na Hotel Samudra
Kochi (na Cochin)
Harato jono sinoa, Kochi
Ny vavahadin'i Kerala dia fantatra ho renivohitra ara-toekarena ao amin'ny fanjakana. ny Fort Kochi faritra dia malaza eo amin'ireo mpizahatany noho ny maritrano tsy manam-paharoa naorin'ny Portiogey. Muziris dia toerana tokony ho adiny iray miala an'i Kochi izay seranan-tsambo taloha malaza amin'ny fitsangatsanganana lova izay hitsidihanao ireo fiangonana, tempoly ary sinagoga taloha rehetra. Raha ny angano iray dia voalaza fa izy no moske voalohany natsangana tany India ihany koa. Aza adino ny maka ny sary tsy maintsy ilaina miaraka amin'ny harato manjono Shinoa amin'ny hariva eto.
Hotely - Radisson Blu na Novotel
Ireo teratany vahiny tonga any India amin'ny e-Visa dia tsy maintsy tonga amin'ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina voatondro. na Kochi (na Cochin) sy Trivandrum dia seranam-piaramanidina voatondro ho an'ny e-Visa Indiana miaraka amin'ny seranan-tsambo voatondro koa i Kochi.
Toeram-piarovana Wildlife Periyar
Elefanta fahita matetika ao amin'ny Periyar Wildlife Sanctuary
Hahita elefanta isaky ny zoro sy zoron-trano any Thekkady ianao, rehefa mandeha amin'ny safari anaty ala mikitroka amin'ireo ala maitso any amin'ny faritra. Ny Farihy Periyar dia a toerana malaza tondrahan'ny mpizahatany ahafahanao manofa sambo ary mankafy ny ambian'ilay toerana kanto. Misokatra ho an'ny mpizahatany ny fitoerana masina mandritra ny taona ary afaka maka safari amin'ny sambo ianao ary ho voasarika amin'ny hatsaran'ny natiora manodidina anao.
Toerana - Thekkady, manodidina ny 165 kilometatra miala an'i Kochi, dia adiny efatra
Mijanona ao - Springdale Heritage Resort
ny tao Vanianady
Wayanad dia tobin'ny havoana mpizaha tany any Kerala ary toeram-pambolen-kazo marobe manomboka amin'ny kafe, dipoavatra, cardamom ary zava-manitra hafa. Ny tontolon'ny tendrombohitra iray manontolo dia rakotra maintso maitso sy matevina. Ny tampon'ny Chembra dia fitsangantsanganana malaza ataon'ny mpizahatany hahita ny toerana mahafinaritra any Wayanad. ny Fialofana Wildlife Muthanga dia 40 minitra monja miala an'i Wayand izay ahafahanao mahita serfa, bison, cheetah ary bera. ny Milatsaka i Meenmutty dia toerana mahafinaritra hafa azo tsidihina satria afaka mijery ny rano mikoriana amin'ny riandrano ianao. ny Zohy Edakkal mitaky ezaka kely hahatongavana any fa mendrika ny ezaka rehetra izany.
Toerana - Manodidina ny 90 kilometatra miala ny Calicut, manodidina ny adiny telo
Mijanona ao - Ny trano fandraisam-bahiny dia malaza be any an-toerana
Tempolin'i Padmanabhaswamy, Trivandrum
The renivohitra Kerala, fonenan'ny kolontsaina manankarena sy manankarena indrindra ao Kerala. Ilay malaza Tempolin'i Padmanabhaswamy natsangan'ny Fanjakan'ny Travancore tamin'ny taonjato faha-16 dia tototry ny Hindus avy amin'ny faritra rehetra manerantany. Ho an'ny mpankafy tantara sy zava-kanto, Trivandrum dia be atolotra miaraka galeriana kanto maro ary tranombakoka misy miavaka, taloha ary fanangonana sarobidy.
Varkala Beach dia toerana malaza notsidihin'ireo mpizahatany ary adiny iray monja miala an'i Trivandrum. Malaza izy io satria ny morontsiraka dia miorina eo amin'ny harambato ary mandritra ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro dia mahavariana ny masomaso avy any amoron-dranomasina. Ny ivon-tany Jayatu nosokafana tamin'ny 2016 dia adiny iray miala an'i Trivandrum fa toerana tsy maintsy tsidihina miaraka amin'ny sary vorona vorona lehibe indrindra eto an-tany.
Mijanona ao - Hotel Galaxy na Fortune Hotel
Fantatra amin'ny hoe pop tanàna misy sary sokitra ary ny tanàna misy zava-manitra any Kerala. Ny morontsiraka Kappad mangina sy mitokana dia tsy maintsy tsidihana any Kozhikode satria tsy hahita mpizahatany maro eto ianao. Ny morontsirak'i Beypore izay iray amin'ireo seranan-tsambo tranainy indrindra any India koa dia toerana tsara hialana sasatra sy hankafizan'ny onjan-dranomasina. Ny morontsiraka Kozhikode dia fizarana mahafinaritra amin'ny hariva. Ny Kozhippara dia lavo eo akaiky eo akaikin'ny tandavan'i Malappuram dia mahafinaritra ny mahita.
Mijanona ao - Residence park na The Taviz Resort
Fetibe Thrissur Pooram
Ny renivohitry ny fanjakan'ny Cochin teo aloha. Ny tanàna dia hita ho renivohitra ara-kolontsaina Kerala. Ny Thrissur Pooram malaza dia fetin'ny fankalazana, filaharana ary mozika. Ny latsaka Athirppally malaza fantatra amin'ny anarana hoe Niagra of India dia latsaky ny 60 kilometatra miala an'i Thrissur. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana ny riandrano dia mandritra ny mononta manomboka amin'ny Jona ka hatramin'ny Septambra ary misy toerana fitsangantsanganana mahafinaritra eo akaikin'ny riandrano.
Toerana - Manodidina ny 95 kilometatra miala an'i Kochi, dia adiny roa
Mijanona ao - Hotel Peninsula na Dass Continental